Epiglottitis (လေပြွန်အဖုံးရောင်ရမ်းခြင်း) - Hello Sayarwon
Epiglottitis (လေပြွန်အဖုံးရောင်ရမ်းခြင်း) ကဘာလဲ။
လေပြွန်အဖုံး နီရဲရောင်ရမ်းနေခြင်းဟာ ဒီရောဂါရဲ့ သိသာထင်ရှားတဲ့ အမှတ်လက္ခဏာတခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လေပြွန်အဖုံးရောင်ရမ်းခြင်းဟာ အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ရောဂါတခုပါ။ လေပြွန်ဝအဖုံးဟာ သင့်လျှာရဲ့ အရင်းမှာ ရှိပြီး အရိုးနုလေးတွေနဲ့ အဓိက ပြုလုပ်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။
သင်အစာစား၊ရေသောက်တဲ့အခါ လေပြွန်ထဲကို အစာတွေ၊ရေတွေ မဝင်ရအောင် ဒီလေပြွန်အဖုံးက ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ လေပြွန်ဖုံးမှာ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ တစ်ရှူးတွေဟာ ကူးစက်ပိုးဝင်ပြီဆိုရင် ရောင်ရမ်းလာပြီး လေဝင်ရာလမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့လိုက်ပါတော့တယ်။ တကယ်လို့ သင် ကိုယ်တိုင် ဒါမှမဟုတ် သင်မိသားစု၊မိတ်ဆွေတယောက်ယောက်မှာ လေပြွန်အဖုံး ရောင်ရမ်းတဲ့ ဝေဒနာခံစားနေရပြီလို့ ယူဆရင် အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသမှုကို အမြန်ခံယူရပါမယ်။
Epiglottitis (လေပြွန်အဖုံးရောင်ရမ်းခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
လေပြွန်ဖုံးရောင်ရမ်းခြင်းဟာ ရှေးယခင်ကဆိုရင်တော့ ကလေးတွေမှာသာ အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါတမျိုးဖြစ်ပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ အရွယ်ရောက်ပြီးသား လူကြီးတွေမှာပါ ပိုပိုပြီး တွေ့လာရပါပြီ။ ဘယ်အသက်အရွယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ရောဂါကို အမြန်ဆုံးအဖြေရှာအတည်ပြုပြီး ဆေးဝါးကုသမှုခံယူဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုပေမယ့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ ပိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ကလေးတွေမှာတော့ ပိုမိုပြီး အထူးဂရုစိုက် အဖြေရှာ ကုသပေးရပါမယ်။
ဒီရောဂါဟာ အလွန်အဖြစ်များပါတယ်။ အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။
Epiglottitis (လေပြွန်အဖုံးရောင်ရမ်းခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
လေပြွန်ဖုံးရောင်ရမ်းခြင်း ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့…
ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲ လေပြွန်ရောင်သည်ဖြစ်စေ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ လက္ခဏာတွေက အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့(ကလေး ဒါမှမဟုတ် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ) ရောဂါလက္ခဏာတွေ ကွဲပြားမှုရှိနေနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေဟာ နာရီပိုင်းအတွင်းမှာပဲ လေပြွန်ရောင်ခြင်းဝေဒနာကို ခံစားလာရနိုင်ပေမယ့် အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာတော့ ပိုမိုနှေးကွေးပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမှ ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေမှာ မြင်တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရှေ့သို့ကုန်းလိုက်ရင် သို့မဟုတ် မတ်မတ်ထိုင်လိုက်ရင် ရောဂါလက္ခဏာများ သက်သာသွားခြင်း။
သွားရည်များ မထိန်းနိုင်ဘဲ စီးကျခြင်း။
လေပြွန်ရောင်ဝေဒနာ ခံစားနေရတဲ့ လူကြီးတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့
ပုံမှန်အတိုင်း ကောင်းစွာ အသက်မရှုနိုင်းခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လေပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်းကို မကုသဘဲ ထားမယ်ဆိုရင် လေဝင်ရာလမ်းကြောင်းကို လုံးဝပိတ်ဆို့သွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ပိတ်ဆို့သွားပြီဆိုရင် (သွေးထဲမှာ အောက်ဆီဂျင်ဓါတ် တဖြည်းဖြည်းနည်းသွားတာကြောင့်) သင့်အရေပြားဟာ ပြာနှမ်းနှမ်းဖြစ်လာမှာပါ။ ဒီအခြေအနေကတော့ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပြီး အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသမှုကို အမြန်ဆုံး ခံယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Epiglottitis (လေပြွန်အဖုံးရောင်ရမ်းခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဘက်တီးရီးယားပိုး ကူးစက်ခံရခြင်းဟာ လေပြွန်ဖုံးရောင်ရမ်းခြင်းကို အဓိကဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းပါ။ သင်အသက်ရှုတဲ့အခါ ဘက်တီးရီးယားက သင့်ခန္ဓါကိုယ်ထဲ ဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ လေပြွန်ဖုံးကို ပိုးကူးစက်ပါပြီ။ လေပြွန်ဖုံးရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ အဓိက ပိုးမွှားကတော့ Hib လို့လည်း ခေါ်ကြတဲ့ Haemophilus influenzae typebအမျိုးအစား ဘက်တီးရီးယားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ဘက်တီးရီးယားပိုးကူးစက်ခံနေရတဲ့သူ ချောင်းဆိုးတာ၊နှာချေဆတ်တာ ဒါမှမဟုတ် နှာခေါင်းကနေ လေမှုတ်ထုတ်လိုက်တာမျိုး ပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ထွက်လာမယ့် Hib ဘက်တီးရီးယားပါဝင်လာတဲ့ လေကို ရှူသွင်းမိပြီဆိုရင်တော့ သင်လည်း ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပါပြီ။ လေပြွန်ဖုံးရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အခြားသော ဘက်တီးရီးယား မျိုးနွယ်တွေကတော့ Streptococcus A, B, ဒါမှမဟုတ် C နဲ့Streptococcus pneumoniae ဘက်တီးရီးယားတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။Streptococcus A အမျိုးအစား ဘက်တီးရီးယားကတော့ လည်ချောင်းနာခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သလို ဘက်တီးရီးယား နမိုးနီးယားကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ မျိုးစိတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရေယုံလို၊ရေကျောက်လို ရောဂါမျိုးကို ဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကလည်း (အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါတွေနဲ့အတူ) လေပြွန်ဖုံးရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အနှီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် မှိုစွဲခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ ဖန်ဂိုင်း မှိုတွေကလည်း လေပြွန်ဖုံးရောင်ရမ်းမှုကို ဖြစ်စေမှာပါ။
အခြားသော အကြောင်းရင်းတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတုဗေဒပစ္စည်းတွေ ရှုသွင်းခြင်း၊ဓါတုဗေဒပစ္စည်းများကြောင့် စားလောင်ခြင်း။
လည်ချောင်းထဲ ရေနွေးငွေ့လောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားပုံစံတမျိုးမျိုးဖြင့် အပူလောင်ခြင်း။
ဓါးထိုးခံရခြင်း၊သေနတ်ပစ်ခံရခြင်း ကဲ့သို့သော လည်ချောင်းထိခိုက်ဒါဏ်ရာတမျိုးမျိုး ရရှိခြင်း။
Epiglottitis (လေပြွန်အဖုံးရောင်ရမ်းခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
လေပြွန်ဖုံးရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
လူတိုင်းလူတိုင်း လေပြွန်ဖုံးရောင်ရမ်းခြင်း ဝေဒနာကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
အသက် ဆယ့်နှစ်လအောက်ကလေးသူငယ်တွေမှာ လေပြွန်ဖုံးရောင်ရမ်းခြင်း ဝေဒနာကို ပိုမိုခံစားရနိုင်ချေ ရှိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီကလေးတွေမှာ Hib ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးကို ပြီးပြည့်စုံအောင် မထိုးရသေးတဲ့အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခြုံငုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီရောဂါဟာ အသက်နှစ်နှစ်ကနေ အသက်ခြောက်နှစ်အထိ ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များတာကိုလည်း တွေ့ရပါသေးတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူကြီးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ အသက် ရှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်ထက်ကြီးခြင်းဟာ လေပြွန်ဖုံးရောင်ရမ်းခြင်းရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို မြင့်မားစေတဲ့ အကြောင်းရင်းခံတခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။Hib ကာကွယ်ဆေးမထိုးပေးနိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်တွေ ဒါမှမဟုတ် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲတဲ့ ဒေသတွေမှာ နေထိုင်တဲ့ ကလေးငယ်တွေဟာလည်း ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေ မြင့်မားပါတယ်။ ကိုယ့်ကလေးကို Hib ကာကွယ်ဆေးမထိုးပေးတဲ့ မိဘတွေကြောင့်လည်း ကလေးတွေမှာ ရောဂါခံစားနိုင်ချေ မြင့်မားပါတယ်။
ဒီရောဂါဟာ အမျိုးသမီးတွေထက် အမျိုးသားတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပြီး အကြောင်းရင်းကိုတော့ တိတိပပ မသိရှိရသေးပါဘူး။
တကယ်လို့ သင်ဟာ လူအမြောက်အများနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတယ် ဒါမှမဟုတ် နေထိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ အခြားလူတွေဆီက ကူးစက်ရောဂါပိုးကူးဖို့ အခွင့်အလမ်း ပိုများပါတယ်။ အလားတူပါပဲ၊ လူဦးရေထူထပ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေ (ဥပမာ ကျောင်း ဒါမှမဟုတ် နေ့ကလေးထိန်းကျောင်းတွေ)ဟာ သင်နဲ့ သင့်ကလေးကို အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါအမျိုးအစားအားလုံးနဲ့ ထိတွေ့နိုင်ချေ ပိုများစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အထက်ဖော်ပြပါ ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာဆိုရင် လေပြွန်ဖုံးရောင်ရမ်းခြင်း အဖြစ်များပါတယ်။
သင့်ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားစနစ်အားနည်းတယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ ကူးစက်ပိုးမွှားတွေကို တိုက်ထုတ်ဖို့ ပိုမိုခက်ခဲသွားမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ခုခံအားစနစ် ကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်ခြင်းဟာ လေပြွန်ဖုံးရောင်ရမ်းခြင်းရောဂါကို ပိုဖြစ်စေပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ ဆီးချိုရောဂါရှိခြင်းဟာ ဒီရောဂါပိုမိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Epiglottitis (လေပြွန်အဖုံးရောင်ရမ်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဒီရောဂါဟာ အခြေအနေ အတော်လေးဆိုးရွားတတ်တာမို့ အရေးပေါ်အနေအထားမှာဆိုရင် ရောဂါရာဇဝင်မေးမြန်းခြင်း နဲ့ လူနာအား စမ်းသပ်ခြင်း၊ ဒီနှစ်ခု ပြုလုပ်ရုံနဲ့တင် လေပြွန်ဖုံးရောင်ရမ်းတာ ဟုတ်မဟုတ် အဖြေရှာ အတည်ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်မှာ လေပြွန်ဖုံးရောင်ရမ်းတဲ့ ရောဂါခံစားနေရပြီလို့ ဆရာဝန်က ယူဆရင် အများအားဖြင့် ဆေးရုံတက်ခိုင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ဆေးရုံတက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ရောဂါကို ပိုမိုပြီးတိတိကျကျ သိရှိအတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ စစ်ဆေးမှုတွေကို ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လည်ချောင်းနဲ့ ရင်ဘတ်ကို ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း : ရောင်ရမ်းမှု နဲ့ ကူးစက်ပိုးဝင်မှု ဘယ်အခြေအနေထိ ဆိုးရွားသလဲဆိုတာကို သိရှိနိုင်ပါမယ်။
လည်ချောင်းမှ အကျိအချွဲကိုယူပြီး ပိုးမွေးခြင်း၊သွေးဖောက်ပြီး ပိုးမွေးခြင်း : ကူးစက်ပိုးဟာ ဘက်တီးရီးယားကြောင့်လား သို့မဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လားဆိုတာကို သိရှိနိုင်ပါမယ်။
မှန်ပြောင်းပြွန်လေးထည့်ပြီး လည်ချောင်းအတွင်းပိုင်းအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း။
Epiglottitis (လေပြွန်အဖုံးရောင်ရမ်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
သင့်မှာ လေပြွန်ဖုံးရောင်ရမ်းခြင်း ရောဂါ ခံစားနေရပြီလို့ ဆရာဝန်က ယူဆလိုက်ပြီဆိုရင် ပထမဆုံး ခံယူရမယ့် ကုသမှုကတော့ သင့်ရဲ့ သွေးတွင်းအောက်ဆီဂျင်ပမာဏကို တိုင်းတာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်(pulse oximetry device လို့ခေါ်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတခုကို အသုံးပြုပြီး တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ်)။ တကယ်လို့ သင့်သွေးထဲမှာရှိတဲ့ အောက်ဆီဂျင်ပမာဏ အရမ်းနည်းနေပြီဆိုရင်တော့ နှာခေါင်းပိုက် ဒါမှမဟုတ် နှာခေါင်းအုပ်တို့ကနေတဆင့် အောက်ဆီဂျင်ရှုရပါမယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ ကုသမှုနည်းလမ်းတွေထဲက တခု ဒါမှမဟုတ် အားလုံးကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သင်အစာ/ရေ တို့ကို ပုံမှန်မြိုနိုင်ပြီဆိုတဲ့ အချိန်ထိ အကြောသွင်းဆေးတွေကို (အာဟာရအလို့ငှာ၊ရေဓါတ်အလို့ငှာ) သွင်းပေးရပါမယ်။
ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကို သုတ်သင်ဖို့အတွက် ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးတွေကိုလည်း သုံးစွဲရပါမယ်။
လည်ချောင်းအရောင်ကျစေဖို့အတွက် အရောင်အရမ်းကျဆေးတွေ (ဥပမာ ကော်တီကိုစတီးရွိုက်)ကို သုံးစွဲရပါမယ်။
ထူးထူးခြားခြား ဆိုးရွားတဲ့ လူနာတွေမှာတော့ လည်ပြွန်ကို အပေါက်ဖောက်ပြီး ကုသမှုခံယူဖို့ လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို အပေါက်ဖောက်တဲ့အခါ ဆရာဝန်က သင့်ရဲ့လေပြွန်ထဲကို အပ်တချောင်းထိုးထည့်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။ အခုလို လည်ပြွန်အပေါက်ဖောက်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် အောက်ဆီဂျင်အဝင်အထွက်ကို ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်ရှိနေစေသလို အသက်ရှုလမ်းကြောင်း အလုပ်မလုပ်တော့ခြင်းကိုလည်း တားဆီးကာကွယ် ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ ရောဂါဖြစ်နေမှန်းအမြန်သိပြီး အမြန်ကုသမှုခံယူတဲ့ လူနာအများစုဟာ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ကောင်းမွန်ပျောက်ကင်းသွားလေ့ရှိပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက လေပြွန်ဖုံးရောင်ရမ်းခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် လေပြွန်ဖုံးရောင်ရမ်းခြင်း ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ပိုးမွှားကူးစက်ပျံ့နှံ့ခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် လက်ကို မကြာခဏဆေးပေးပါ ဒါမှမဟုတ် လက်ဆေးဂျယ်လ်ကို အသုံးပြုပေးပါ။
အခြားလူတွေနဲ့ စားစရာ သောက်စရာ ပန်းကန်ခွက်ယောက်တွေ မျှဝေသုံးစွဲခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။
အာဟာရပြည့်ဝစွာ စားသုံးခြင်း၊ဆေးလိပ်ကို ရှောင်ကျဉ်ခြင်း၊လုံလောက်စွာ အနားယူခြင်း၊ကာလရှည်စွဲကပ်နေတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေအားလုံးကို စနစ်တကျ ရက်ချိန်းမှန်မှန်ကုသပေးခြင်းအားဖြင့် သင့်ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားစနစ်ကို ကောင်းမွန်အောင် ထိန်းသိမ်းပါ။
Epiglottitis. https://www.healthline.com/health/epiglottitis#prevention7. Accessed
Epiglottitis. https://www.webmd.com/a-to- z-guides/epiglottitis- infection-
inflammation#1. Accessed October 16, 2017